Archive du 14-oct-2020
Manamboatra vitamina C natoraly
Na dia efa mihalefy aza ny fiparitahanny valanaretina Covid-19 izay tena nilana ny fihinanana vitamina C
Cake amin'ny ovy by Celina
Akora ilaina : Ovy 500g Tongolo 1 Lardons 75g Atody 2 Creme mandranoka 20 santilitatra Camembert 150g Poitrine fumée didiny 4 Sira sy dipoavatra Dibera
Jejoo: Ilaina fantarina ve ny lasanny olona iray izay tiavina
Mia: Tena ilaina fantarina raha amiko. Indrindra raha olona hifampizara fiainana aminao ilay izy.
19 taona aho. Tena tiako be ilay olona miaraka amiko,
nefa tato ho ato izy, lasa tsy miraharaha ahy mihitsy, sady tsy miantso no tsy mandefa SMS.
noho ny havizanana
Karazanaretinan-doha mahery vaika ny migraine, ary mety hahazo ny olon-drehetra izy ity, saingy ny vehivavy no tena betsaka voany.
Jejoo : miova tokoa ve ny olona tsirairay ao anaty couple rehefa lasa mpivady ?
Kiady Razafindrabe : Raha misy isanandro ny fivoarana na 0,001 % aza ,aminny lafiny rehetra, dia izay no idealy eo aminny mpifankatia. Mitombo aminny fitiavana , aminny fifankazahoana,
Hevitry ny lehilahy
Max Ehrich : namoy fo tanteraka ilay nosarahini Demi Lovato
Vao roa volana monja no nanao fangatahana ani Demi Lovato ho vadiny i Max Ehrich dia efa nisaraka sahady izy ireo. Tsy mora ny fisarahana saingy nahita marimaritra iraisana izy ireo.
Shopping « A la Malagasy »
1. Cafetière 1,8l : 35000ar - Kaopy gasy sy sous tasse : 10.000ar PM / 12.000ar MM - Zinga 1l : 25.000ar  Page Facebook « ChrisArt » - contact : 034 76 104 08
Bevohoka : Ireo otrikaina ilaina isanandro
Misy antony avokoa ny ilana ny otrikaina rehefa mitondra vohoka. Tsy voatery hihinana avo 2 heny ihany koa fa kosa izay mahavoky tsara no atao :
Vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara Hifanakalo hevitra aminny vehivavy afrikanina 50 tapitrisa
Nanotrona ary niray feo taminireo vehivavy mpandraharaha manerana ani Afrika ny GFEM na ny fivondronanireo vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara, taminny famoahana ofisialy anilay vovonana nomerika 50MFAP na 50 Millions de Femmes Africaine ont la Parole.
ADY TANY ENY AMBOHIMANGAKELY Narodanny kaominina ilay vavahady namefy ny lalam-pokonolona
Mitohy hatrany ilay raharaha ady tany eny aminny Fokontany Andranovao, kaominina ambanivohitra Ambohimangakely.
Toerana fandraisana ireo mpanakanto aminny cabaret sy fanaovana lanonana no tena ahafantarana ny Bonara Be. Mbola ao anatinny fanohanana mpanakanto ihany fa aminny endriny famokarana vokatra mihitsy indray no nitsangananny BonaraBe Production eny 67Ha izay notokanana ny alatsinainy lasa teo.
Covid19 : ho taterina isaky ny sabotsy ny fivoaranny tarehimarika
Nivahiny tao aminny fandaharana miara-manonja ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, rtoa Lalatiana Andriantongarivo, omaly.
KAOMININA ANTEHIROKA Hanamboatra kara-panondro ho anireo mpanala Bacc
Anisanny antontan-taratasy tsy maintsy ilaina hiatrehana ny fanadinana Bakalôrea, indrindra fa ho anireo efa feno taona ny fananana kara-panondrom-pirenena.
Novonoinity ramatoa 57 taona ilay rafiny, rehefa tratrany teo am-panaovana firaisana niaraka taminny vadiny. Taorianizay dia namono tena ihany koa ity ramatoa ity.
Operation smile : Zaza sima miisa 62 no ho tohanana sy arahi-maso
Zaza miisa 62, eo anelanelanny 3 volana ka hatraminny 5 taona manana olana eo aminny ati-vava na sima manerana ny faritra 9 eto amintsika no tafiditra ao anatinny praograma ara-tsakafo izay tarihinny Operation Smile. Ho raisina an-tanana manokana ireo zaza ireo,
TOETRANDRO Aminny faranny herinandro vao hisy orana
Tena mahazo vahana ny hafanana eto an-drenivohitra. Mahatratra hatrany aminny 39 °C ny maripana farany ambony indrindra raha 23 °C no farany ambany indraindray, raha araka ny fanadihadiana natao teo anivonny sampana mpamantatra ny toetrandro.
Andro eran-tany ho anny sakafo Tsy maintsy apetraka ny lamina ara-tsakafo maharitra
Hankalazaina mandritra ny herinandro ny andro eran-tany ho anny sakafo, aminity taona ity, andro eran-tany izay ankalazaina isaky ny 16 oktobra isan-taona raha tsiahivina.
« Annexe TPIC » Ivato Efa afaka mandray ireo mpisotro ronono
Tontosa ny faranny herinandro teo ny lanonam-pitokanana ny « Annexe Tresorerie Principale Intercommunale » (TPIC) Ivato ao aminny Kaominina Antehiroka izay natrehanny Tale Jeneralin'ny Tahirimbolam-panjakana, Ranjalahy Ihaja sy ny Benny Tanàna, Rivolalaina Vonjy Arthur.
CHU Anosiala Nankasitrahanny OMS manokana
Nankasitraka manokana ireo mpiasa rehetra ao aminny hopitaly CHU Anosiala Ambohidratrimo
Mialy Rajoelina Tsy manana kaonty Facebook
Nanentana ny rehetra mba hitandrina sy ho mailo aminny fisolokiana misy eny aminny tambajotra Facebook ny pejyAssociation FitiaOfficiel. Nalaza be tao anatinity tambajotra Facebook ity mantsy ny « publication » iray,
Priscilla, nahazo 17,78/20 taminny BEPC Te ho injeniera aminny tontolo iainana
Ankizy namiratra, nahazo salanisa ambony indrindra, taminireo ankizy nanala BEPC tao Sambava i Misy Priscilla. Izy no nahazo ny laharana voalohany, taminny salanisa 17,78/20.